ISeychelles, yisiphi isiqhingi ongasikhethela iholide elihle epharadesi | Izindaba Zokuhamba
ISeychelles, yisiphi isiqhingi ongasikhethela amaholide amahle kakhulu epharadesi
UMariela Carril | | Iziqondiso, Isiqhingi saseSeychelles
Akungabazeki ukuthi enye yezindawo ezinhle kakhulu nezilusizo ebhishi eYurophu, uma umuntu engafuni ukuphela emabhishi aseMedithera, yiwona Isiqhingi saseSeychelles. Iqembu le- Iziqhingi eziyi-115 oLwandlekazi i-Indian, yesihlabathi esimhlophe, isimo sezulu esifudumele, amahlathi aluhlaza, izihlahla zesinamoni nokuthula okuhle.
Angazi noma ngubani ongazange ajabulele amaSeychelles, ngakho-ke uma kuleli hlobo ucabanga ukuyobazi, nayi eminye imibuzo okufanele uyicabangele ukuze "uzuze kakhulu kulokho okuhlangenwe nakho" futhi wazi khetha ukuthi isiphi isiqhingi iSeychelles okufanele uye kuso.
1 Iziqhingi zaseSeychelles
2 Isiqhingi sasePraslin
4 ILa Digue
Iziqhingi bangamakhilomitha angaphezu kwenkulungwane ukusuka ogwini lwase-Afrika, endaweni yaseMauritius noma eMadagascar. Inhlokodolobha yeziqhingi yiVictoria futhi inani labantu selizungeze abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye. Yizwe elincane elizimele kakhulu e-Afrika futhi lazuza leyo nkululeko ngo-1976, lapho layeka ukuba elase-United Kingdom, yize liyingxenye yeCommnwealth.
Njengamanje kuneziqhingi eziyi-16 kuphela ezinikeza indawo yokuhlala ngakho-ke lapho uthatha isinqumo sokuthi uzohlala kuphi ungabheka okunikezwayo kulezi ziqhingi, kuyisinyathelo sokuqala lapho uhlela lolu hambo. Kukhona amahhotela asezingeni lezinkanyezi ezinhlanu anakho konke ukunethezeka kuya kumahostela noma amakamelo amaningi asebhishi olwandle. Ngakho-ke, noma ungenayo imali eningi, ungayijabulela.
Indawo, noma ngabe injani, yinhle futhi kuzo zonke iziqhingi unethuba lokukwenza ukubhukuda, ukushisa ilanga, ukudilika, ukukhipha izinyoka noma vele wehlise ijubane emadolobheni uphumule.
Kuyisiqhingi sesibili ngobukhulu yeqembu futhi kuhlala abantu abangama-6500 kepha noma kunjalo kuyisiqhingi esithule kakhulu, esithuthukiswe kancane kuneMahe, ngokwesibonelo, futhi Kunconywa uma ufuna ukuphumula futhi uphumule kuphela. Amabhishi mahle futhi amabili awo avame ukuba phakathi kwamabhishi amahle kakhulu emhlabeni: i-Anse Geogette, iCote D'Or ne-Anse Lazio. Uma uthanda ukudlala igalofu lena indawo eSeychelles ngoba Inendawo yegalufu enemigodi engu-18.
Ukukhetha lesi siqhingi ngeke kukuvimbe ekuvakasheleni abanye ngoba ungasisebenzisa njengo isisekelo sokuhlola nokuhamba izintaba. Ungabona izinyoni eCousine Island, imihlume nezimfudu ezinkulu eCurieuse Island, noma ubhukuda futhi uthwebula i-snorkel eSt. EPraslin efanele kunezindawo ezintathu zokuhlala: iBaie St Anne, iGrande Anse ne-Anse Volbert. Ngemuva kwalokho kuhlala kungahlali muntu.
Amabhishi nxazonke mahle, aposikhadi-aphelele, anamanzi aluhlaza okotshani nesihlabathi esikahle ngofulawa. Amabhishi yinto enhle kakhulu ngePraslinLeyo kanye ne-backpacker vibe ekhululekile yiyona ephumelelayo, noma ngabe ufuna indawo yezinkanyezi ezinhlanu ungaba nayo ngoba kukhona ezimbili, iRaffles neLemuria, ezinamabhishi azimele, amakamelo ngamanye nakho konke ukunethezeka okufunayo. Ugu olusenyakatho lungcono kuneningizimu, Gcina lokho engqondweni. Ukuhamba uzungeze isiqhingi kunamabhasi namatekisi ashibhile ukuthi ungaqasha njengoba uqasha imoto.
Ufika kanjani ePraslin? Ufika ngesikebhe usuka eLa Digue noma usuka eMahe, ngemizuzu engama-45 yohambo lwe-catamaran ukusuka eMahe noma ngemizuzu engu-15 nje ukusuka eLa Digue. Uhambo luhle, ngokwemvelo, futhi lunamaqhubu, ngakho-ke ungathatha indiza esikhundleni salokho. Ukusuka eLa Digue ukweqa kuthulile futhi kufushane. Uma undiza nge-Air Seychelles ungafaka ukuma ePraslin ngakho-ke cabanga ngaleyo nketho.
IMahé inamabhishi angamashumi ayisithupha kanye namavava afihlwe yonke indawo. Inengaphakathi eliluhlaza kakhulu, luhlaza kakhulu, futhi amabhishi ayisihlabathi esimhlophe. Isiko lesiCreole futhi kunamadolobhana amancane ngaphezu kwedolobha, njengeMahe Kuyisiqhingi esikhulu kunazo zonke futhi esinabantu abaningi eSeychelles. IVictoria, inhlokodolobha, ilapha ogwini olusenyakatho-mpumalanga yesiqhingi.
Uma ungafuni ukucabanga okuningi noma ufuna ukuphunyuka kwezokuvakasha ezibaluleke kakhulu, iMahe ingaba lapho uya khona: Kunehlathi, kunezintaba, kunezimpophoma, kunamabhishi, ungenza imidlalo eminingi yamanzi. Ungenza imisebenzi ethe xaxa, ngokuhlukahluka, kunangezinye iziqhingi ezithandwayo. Ingxube yedolobha kanye nemvelo ngesilinganiso sayo esifanele ngoba iMahe akuyona iNew York futhi.
IMorne Seychellois National Park ihlukanisa lesi siqhingi sibe umkhakha osentshonalanga nowasempumalanga. Kuyihlathi elishisayo elinezintaba eziphakeme ngamamitha angu-900. Uma wehla eVictoria ungagibela ibhasi noma itekisi ehamba ngomzila bese unqamula izintaba ubheke ogwini olusentshonalanga lapho kunezindawo zokungcebeleka ezinhle, amabhishi amanzi azolile nezindawo zokuvakasha ezizimele ngamanani aphansi. Lapha indawo edumile yi-spa yaseBeau Vallon kepha uma uqhubeka nokuhamba kunezinye izindawo ezinhle namabhishi, nabantu abancane.
Enye indawo ehehayo Anse royal, idolobha eliphakathi nendawo elinezindawo zokudlela, izimakethe nezitolo. Ogwini oluseningizimu ngeke uthole okunye okuthuthukile kepha uzothola amanye amabhishi amahle eMahe. Ungaziqhathanisa namabhishi asePaslin noma eLa Digue? Uma okwakho kungamabhishi okuphupha, ngingakhetha lezo zalezi ziqhingi ezimbili zokugcina, kubi ngokungangabazeki UMahe unikeza i-combo ethokozisayo uma uhamba njengomndeni.
Lokho kungaba isinqumo sami: Kunconywa kakhulu umndeni wakwaMahe.
Kuyisiqhingi esincane kunazo zonke eziqhingini ezakhiwe. Kukhona abantu abayizinkulungwane ezimbili kuphela abaphilayo, ayinaso isikhumulo sezindiza nemizila embalwa. Kuyindawo yabakhululeke kakhulu futhi bezolile kepha inamabhishi amahle kakhulu futhi athandwa kakhulu. Ungamazi uLa Digue kusuka ePraslin noma eMahe kepha uma uthanda igagasi elithulile lokhu kungaba yindawo oya kuyo.
Uzofika edolobhaneni laseLa Passe, ogwini olusempumalanga, lapho ungabona khona isiqhingi sasePraslin. Amadolobha awaqhelelene kakhulu. Amabhishi amahle kakhulu asogwini oluseningizimu, ngaphesheya kwegquma, Umthombo we-Anse D 'Argent, Petit Anse, Grand Anse, Anse Cocos. Ngasenyakatho kune-Anse Severe ne-Anse Patates. Kuhlala kuthiwa amabhishi amahle kakhulu eSyechelles yiSource D'Argent ngakho-ke ungaphuthelwa.
Ukusuka kwenye indawo uye kwenye ngenkululeko ungaqasha ibhayisikili. Uma uhlala ehhotela kungenzeka bakunikeze mahhala kepha kunezitolo eziningana eziqashisayo. Uthenga ukuthenga nokuphuza uhambe nohambo, akunjalo? Kunamatekisi ambalwa futhi amanani awashibhile kangako, yize ungawaqasha uhhafu wosuku noma usuku lonke uma ungafuni ukugibela ibhayisikili. Kukhona insizakalo yebhasi ekuhambisa nesiqhingi futhi.
Ngokuthola indawo yokuhlala kanokusho kunendlela eyodwa kuphela: iLa Domaine De L'Orangerie. Kamuva kunamahhotela amancane we-boutique namanye amahhotela omndeni nekhishi. Iningi lendawo yokuhlala isedolobheni, hhayi olwandle, kepha njengoba isiqhingi sincane, awude ube kude nolwandle. Futhi ungafika kanjani eLa Digue? Kukhona izikebhe eziyisikhombisa ngosuku ezisuka ePraslin. Uhambo luyimizuzu engu-15 futhi lubiza ama-euro ayi-15.
Kusuka kuMahe akukho okuqondile ngakho-ke kufanele uye ePraslin ngesikebhe bese usuka lapho uye eLa Digue kepha kwenziwa ngethikithi elilodwa. Kunezinsizakalo ezimbili ngosuku kanti ithikithi libiza cishe ama-euro angama-65. Kubiza kancane, akunjalo?
IMahe, iPraslin neLa Digue ngaleyo ndlela iziqhingi ezintathu eziheha izivakashi zaseSyechelle. Zonke zinhle ngokulinganayo, azikho ezizokudumaza, kepha hlaziya kahle ukuthi hlobo luni lweholide olifunayo ukuze ukwazi ukuwajabulela ngendlela efanele. Unenhlanhla!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » ISeychelles, yisiphi isiqhingi ongasikhethela amaholide amahle kakhulu epharadesi
Izinto eziyi-10 okufanele zenziwe eVenice